पोखरीमा माछाको अबस्था के छ ? – कृषक र प्रविधि
By Krishna Thapa November 19, 2020 November 19, 2020
नेपालमा माछापालनको बृद्धि संगं क्रमिक रुपमा यसमा लाग्ने कृषि ब्यवसायीहरुको बढ्दै आएको छ । परम्परागत माछापालन संगसगै ब्यबसायिक पनि बढ्दै आउन्दा दाना देखि यो संग सम्बन्धित मेशिनको व्यवसाय पनि बढेको छ साथसाथै सरकारी अनुदानका कार्यक्रम पनि छ । यदि तपाई माछापालन व्यवसायमा हुनुहुन्छ भन्ने प्रविधि, सरकारी अनुदानको कार्यक्रम संगसंगै जाडो मौसमा निम्न कुराहरुलाई ध्यान दिनुहोला ।
इ.यु.एस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) संक्रमित माछाको शरीरमा स-साना राता धब्बाहरु देखिन्छ र अत्याधिक संक्रमण भएको माछाको शरीरमा गहिरो घाउ हुन्छ। यस्तो लक्षण देखिएमा संक्रमित पोखरीमा सिफालेक्सिन (Cephalexin) ८० एम.जी. प्रति के.जी. माछालाई १५ दिनसम्म दानामा मिसाई खुवाउनुहोस् साथै कोर्सोलिन टि.एच. (Kohrsolin TH) ले दुई साताको अन्तरालमा ९०० एम.एल. प्रति हेक्टर जलाशयका दरले कम्तिमा एक मिटर पानी गहिराई कायम गरि पोखरीको उपचार गर्नुहोस्।
पंगास जातको माछाले चिसो सहन नसक्ने हुँदा बिक्री योग्य साईजको माछालाई अलग्गै छुट्टाई अन्य माछालाई करिब २-२.५ मिटर गहिरो पोखरीमा स्टकिंग गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नुहोस्।
न्यानो पानीमा हुर्कने माछाले पानीको तापक्रम २० डिग्री सेल्सियस भन्दा कम भएपछि दाना कम खान्छ र १४-१५ डिग्री भन्दा कम भएपछि नखान सक्छ। चिसो पानीमा पालिने ट्राउट माछाले २२-२३ डिग्री भन्दा बढी र ८-९ डिग्री भन्दा कम भए राम्ररी दाना खाँदैन। त्यसैले पोखरीको पानीको तापक्रम र दिएको दाना खाए-नखाएको अनुगमनका आधारमा थप दाना दिनुहोस्। दाना खाएको छैन भने केही दिन दाना रोक्नुहोस, नत्र दाना खेर जान्छ।